Kuthetha Ukuthini Ukuzalwa Ngokutsha? Ithini IBhayibhile?
FUNDA NGOLUNYE ULWIMI ISepedi ISpanish Isi-Iloko Isi-Indonesia Isi-Itali IsiAlbania IsiAmharic IsiArabhu IsiArmenia IsiAzerbaijani IsiAzerbaijani (sesiCyrillic) IsiBhulu IsiBulgarian IsiCebuano IsiChichewa IsiCreole saseHaiti IsiCroatia IsiCzech IsiDanish IsiDatshi IsiEstonia IsiEwe IsiFinnish IsiFrentshi IsiGa IsiGeorgia IsiGrike IsiHausa IsiHebhere IsiHiligaynon IsiHungary IsiJamani IsiJapan IsiKinyarwanda IsiKirghiz IsiKirundi IsiKorea IsiLingala IsiLithuania IsiMakedonia IsiMalagasy IsiMalay IsiMalayalam IsiMaltese IsiMyanmar IsiNepali IsiNgesi IsiNorway IsiNzema IsiOssetia IsiPhuthukezi IsiPolish IsiRashiya IsiRomania IsiSamoa IsiSerbia IsiSerbian (saseRoman) IsiShona IsiSinhala IsiSlovak IsiSlovenia IsiSwahili IsiSwedish IsiTagalog IsiTatar IsiTelugu IsiThai IsiTiv IsiTshayina SaseMandarin (Esenziwe Lula) IsiTshayina SaseMandarin (Esiqhelekileyo) IsiTswana IsiTurkish IsiUkrainian IsiVenda IsiVietnam IsiXhosa IsiYoruba IsiZulu isi-Igbo
Ibinzana elithi “ukuzalwa ngokutsha” libhekisela kubuhlobo obutsha phakathi kukaThixo nomntu ozalwa ngokutsha. (Yohane 3:3, 7) UThixo ubenza abantwana bakhe abo bazalwa ngokutsha. (Roma 8:15, 16; Galati 4:5; 1 Yohane 3:1) Ngokufanayo nabo bamkelwe ngokusemthethweni, batshintshelwa ekubeni yinxalenye yentsapho kaThixo.—2 Korinte 6:18
Kutheni umntu ezalwa ngokutsha?
UYesu wathi: “Ngaphandle kokuba nabani na azalwe kwakhona, akanakububona ubukumkani bukaThixo.” (Yohane 3:3) Ngoko ukuzalwa ngokutsha kulungiselela umntu ukuba alawule noKristu kuBukumkani bukaThixo. Obu Bukumkani bulawula busezulwini, ngoko iBhayibhile ichaza ‘ukuzalwa ngokutsha’ njengokunikwa ilifa ‘elibekwe emazulwini.’ (1 Petros 1:3, 4) Abo bazalwa ngokutsha banikwe isiqinisekiso sokuba baza “kulawula ndawonye njengookumkani” kunye noKristu.—2 Timoti 2:12; 2 Korinte 1:21, 22.
Uzalwa ngokutsha njani umntu?
Xa uYesu wathetha ngalo mba, wathi abo bazalwa ngokutsha baya ‘kuzalwa ngamanzi nomoya.’ (Yohane 3:5) Eli binzana libhekisela ekubhaptizweni emanzini kuze kulandele ukubhaptizwa ngomoya oyingcwele.—IZenzo 1:5; 2:1-4.
UYesu waba ngumntu wokuqala ukuzalwa ngokutsha. Wabhaptizwa kuMlambo iYordan, emva koko wathanjiswa nguThixo (okanye, wabhaptizwa) ngomoya oyingcwele. Ngolo hlobo uYesu wazalwa ngokutsha njengonyana kaThixo wokomoya enethemba lokubuyela ezulwini. (Marko 1:9-11) UThixo walizalisekisa elo themba ngokumvusa njengesidalwa esingumoya.—IZenzo 13:33.
Abanye abazalwa ngokutsha baqala babhaptizwa emanzini ngaphambi kokufumana umoya oyingcwele. * (IZenzo 2:38, 41) Baba nethemba eliqinisekileyo lokuphila ezulwini, themba elo uThixo aza kulizalisekisa ngovuko.—1 Korinte 15:42-49.
Ubuxoki ngokuzalwa ngokutsha
Ubuxoki: Umntu ufanele azalwe ngokutsha ukuze afumane usindiso okanye abe ngumKristu.
Inyani: Ukuzincama kukaYesu kuzisa usindiso kungekuphela kwabo bazalwa ngokutsha ukuze balawule noKristu ezulwini kodwa kwanabo basemhlabeni baza kulawulwa buBukumkani bukaThixo. (1 Yohane 2:1, 2; ISityhilelo 5:9, 10) Eli qela lesibini lamaKristu linethuba lokuphila ngonaphakade kwiParadesi esemhlabeni.—INdumiso 37:29; Mateyu 6:9, 10; ISityhilelo 21:1-5.
Ubuxoki: Umntu unokuzikhethela ukuzalwa ngokutsha.
Inyani: Ithuba lokuba nobuhlobo noThixo nokusindiswa linokufunyanwa ngumntu wonke. (1 Timoti 2:3, 4; Yakobi 4:8) Noko ke, bakhethwa nguThixo abo baza kuzalwa ngokutsha okanye abaza kuthanjiswa ngomoya oyingcwele. Ngokusuka eBhayibhileni, ukuzalwa ngokutsha “kuxhomekeke, kungekhona kulowo unqwenelayo nakulowo ubalekayo, kodwa kuThixo.” (Roma 9:16) Ibinzana elithi ‘ukuzalwa ngokutsha’ linokuphinda libhekisele “ekusukeni phezulu,” nto leyo ebonisa ukuba ukhetho lwabo bazalwa ngokutsha “lusuka phezulu” okanye kuThixo.—Yohane 3:3.
^ isiqe. 9 Kwenzeka okufanayo nakuKorneli nakwabo wayekunye nabo.—IZenzo 10:44-48.